Shiinaha 2626-1 Warshadda Mashiinka Mashiinka Daboolka Dusha Lagu Tuuri karo iyo Iibiyaasha | Missadola
Na soo wac: +86 13902611679
Maskaxda qalliinka Maskaxda lagu tuuri karo
Maskaxda Wejiga Caafimaadka Maskaxda lagu tuuri karo
Maaskaro wasakh leh
Dharka Difaaca ee la tuuro ee Caafimaadka
Muraayadaha Amniga Anti-Fog
Koofiyada la tuuro
Maaskaro iyo fayras
2626-4 Mashiinka Maskaxda Wejiga 3-Lakabka ah oo Tayo Sare Leh
2626-2 Mashiinka Wasakhda leh ee Mashiinka Dabacsan
2626-1 Mashiinka Wasakhaysan ee Fadhiga Lagu Faan Karo
2626-3 3 Lakabyo Bixiyeyaasha Masks Muuqda Kuwa Madhan
Goobta asalka ah: Guangdong, Shiinaha
Magaca summada: 1AK
Nambarka Moodeelka: KN95 FFP2 MASK
Magaca badeecada: waji xidhka wajiga ee loo yaqaan "KN95 waji waji"
Maaddooyinka: Polyester, Mathblown Stats Meltblown, 4 si taxaddar leh
Cabbirka: 20.5 * 15.5cm
Kaydka: ku filan
xirmo: 10PCS / BAG, 80BAG / BOX, 800PCS / CTN
heerka: EN149: 2001 + A1-2009
Goobta asal ahaan Guangdong, Shiinaha
Magaca Astaanta 1AK
Nambarka Model KN95 FFP2 MASK
Waxyaabaha Polyester, Koronto Static Meltblown, 4 ahaan
Cabbirka 20.5 * 15.5cm
CeWeight xoog CE
Dukaan ku filan
Xidhmada 10PCS / BAG, 80BAG / BOX, 800PCS / CTN
Jaangooyo EN149: 2001 + A1-2009
Tani KN95 iyadoo loo eegayo heerka Shiinaha (GB 2626-2006) waa qalabka cabbira ee maareynta walxaha keena oo leh waxtarka shaandhada> = 95%. Sheyga miiraha iyo sidoo kale naqshada guud ee qalabka neefsashada ee loo yaqaan 'KN95 respirator' waxaa loo xushay qaab maaskaro sidoo kale uu ka ilaaliyo walxaha sida aadka u yar oo aan lagu arki karin isha bini'aadamka. Madaxa dabacsan ayaa sidoo kale xaqiijinaya in maaskarogu ay si adag oo wajiga u egtahay marka si sax ah loo isticmaalo. Sidaa darteed majiro farqiga u dhexeeya wajiga iyo maaskaro, taas oo iyadu gacan ka geysaneysa ilaalinta badashada. Sidoo kale waa in lagu nuuxnuuxsadaa in qalabka neefsashada ee KN95 uu leeyahay buundo sanjabiil ah oo tayo sare leh. Tani dabcan waa mid la adkeyn karo oo markaa si fiican loogu habeyn karo wejiga shaqsiyadiisa wejiga leh faraha.
Tani waxay sidoo kale ilaalisaa aagga sanka muhiimka ah si aad u wanaagsan. Laakiin ma rabno inaan u soo jiidanno ilaalinta uu bixiyo qalabka neefsashada, laakiin sidoo kale maaddada dusha sare ee xoogga leh ee KN95. Tani waxay dammaanad qaadeysaa cimri dheeri. Isla mar ahaantaana, maaddada gudaha ayaa jilicsan taabashada sidaa darteedna waxay siisaa ilaalin raaxo leh xitaa marka aad shaqeyneyso. Badeecadu sidoo kale waa mid horay loo qaabeeyey oo la soo saaray si markaa uma baahnid inaad daahfurto waxyaabo kale oo maaskaro ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa furitaanka ka dibna waad ku dhejin kartaa maaskaro. Si loo hubiyo inaysan waxna khaldamin halkaan, baakad-soo-saarka badeecada maaskarada qalabka neefsashada waxaa ku jira tilmaamaha Jarmalka iyo Ingiriiska ee loo isticmaalo
Hore: 2626-3 3 Lakabyo Bixiyeyaasha Masks Muuqda Kuwa Madhan
Xiga: 2626-2 Mashiinka Wasakhda leh ee Mashiinka Dabacsan
Xarka Maska Dabool Carrada
Telefoon: +86 13902611679
7 shaqo oo baahi weyn loo qabo inta lagu guda jiro coronavirus: ...
Qiyaastii 10 milyan oo Mareykan ah ayaa dalbaday shaqo la’aan wiigaggii ugu dambeeyay ee Maarso. Dhamaan warshadaha oo dhan ma aha kuwo xaalufinaya ama kabaxaya shaqaalaha, hase yeeshe. Iyada oo qalliin looga dalbanayo raashinka, musqulaha, iyo gaarsiinta hidde ...
Waa tan waxa la sameeyo goorta aad u dhowdahay r ...
Waqtiyada ugu wanaagsan, howlgabnimada ma fududa. Coronavirus-ku wuxuu leeyahay kaliya dadka aan xasilloonayn xitaa ka sii badan. Barnaamijka maaliyadeed ee shakhsiga ah ayaa daraasad ku sameeyay hawlgabnimada iyo shaqaalaha wakhti buuxa ah bishii Maajo. In ka badan saddex meelood meel oo iyagu ...
Xirashada maaskaro waxa ay wajihi doontaa $ 800 oo ganaax ah ...
Shaqaale caafimaad, xirtay galoofyada la iska tuuri karo, ayaa cabbiraya heerkulka nin ku jira baarista coronavirus-ka ee xarunta baaritaanka Abril 1,2020 oo ku taal Abu Dhabi, Imaaraadka Carabta.